Tinye Y! Bie na sidebar gị! | Martech Zone
Obi dị m ezigbo ụtọ na Y! Dị ndụ - nkà na ụzụ dị egwu! N'ihi ya, ekpebiri m ịga n'ihu tinye ya n'akụkụ m! Mgbe m na-agbasa ozi, ị ga - ahụ m ka m na - arụ ọrụ na laptọọpụ ol na aka m. Kedu ka m si mee ya? O were obere ọrụ, mana achọpụtara m ya.
Nnukwu ihe mgbochi iji nweta bụ na akwụkwọ Yahoo! URL enweghị ezighi ezi iji tụọ mgbasa ozi ahụ n'ezie!
Koodu maka Y! Na-ebi na sidebar
> param aha = "nkiri" uru = "http://live.yahoo.com/swf/v1/ylsp/douglaskarr" />
> param aha = "mma" uru = "elu" />
> param aha = "bgcolor" uru = "# 869ca7" />
> param aha = "allowScriptAccess" uru = "mgbe niile" />
mma = "elu"
obosara = "180"
elu = "135"
aha = "ylsp"
allowScriptAccess = "oge niile"
mmezi = "etiti"
kpọọ = "eziokwu"
loop = "ụgha"
ụdị = "ngwa / x-shockwave-flash"
> / ihe>
Tags: Adamịganjirimarainbound marketingbanyesecuritymkpaỊnye tiketioge na ịga
Feb 9, 2008 n’elekere 6:43 nke abali
Ọrụ dị mma. You mere ka Yahoo mara? Ọ bụrụ n ’ijide ije a, n’oge na-adịghị anya Microsoft ga-azụtara gị 😉
Ga-abụ ihe na-akpali nnwale iji hụ; Kedu ihe ga-ebu oke: uru na nkwukọrịta ma ọ bụ belata arụpụtaghị ihe? Ọdịghị na enwere ohere dabara adaba na ị nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa karịa ọrụ?
mana nke ahụ kwuru, nke a is na-akpali akpali technology, n'ihi na ugbu a, m na-eche kasị mma ruru eru maka n'ụlọ ahịa.
Feb 10, 2008 n’elekere 11:56 nke abali
Ndewo modifoo! Achọrọ m njikọ maka ịkpọtụrụ Yahoo! gburugburu ngwa mmepe ha mana ha ahụghị nke ọ bụla.
Agaghị m agbasa ozi n'oge awa ọrụ - ị kwuru eziokwu, nke a nwere ike ịkwụsịtụ arụmọrụ m!
Feb 13, 2008 n’elekere 6:03 nke abali
ị nwalela njikọ a:
Feb 9, 2008 na 5:06 PM
Ọ dị mma ma na-emerụ ahụ maka weblog n'ihi na m nọ na ụlọ ọrụ SEO. Ọtụtụ ndị spammers kpọtụrụ na-arịọ ka ịgbanwee njikọ mgbe ha hụrụ na m nọ n'ịntanetị.
Feb 9, 2008 na 5:11 PM
Adịghị m onye SEO (ọ bụ ezie na m na-eme ya) ma hụ otu ihe ahụ, Sergey! Achọpụtara m na ọ bụrụ na anaghị m 'n'ihu ọha' gosipụta onwe m na Y! Live ndị spammers ahụ abịaghị, agbanyeghị.
Kedu ihe ị chere?					kagbuo zara
Ntughari kwa izu